‘बि’किनी’मा अभिनेत्री अदिति बुढाथोकीले सार्वजनिक गरिन य’स्ता तस्बिर (फोटो फिचर) – Khabarhouse
‘बि’किनी’मा अभिनेत्री अदिति बुढाथोकीले सार्वजनिक गरिन य’स्ता तस्बिर (फोटो फिचर)
Khabar house | २९ माघ २०७६, बुधबार ०७:४२ | Comments
काठमाडौं : अनमोल केसीसँग फिल्म ‘कृ’ मा अभिनय गरेकी अभि नेत्री अदिति बुढाथोकी यतिबेला बैंककमा छिन्। उनी घुम घामका लागि त्यहाँ पुगेकी हुन्। मुम्बईमा रहँदै आएकी यी अभिनेत्रीले ‘कृ’ पछि अन्य फिल्ममा अवसर पाएकी छैनिन् । तर, उनले आफ्नो ग्ल्या’मर अवतारका कारण दर्शकको ध्यान भने खिचिरहन्छिन् । पछिल्लो समय अभिनेत्री अदितिलाई भारतीय र्‍यापर अलिप मोरानीसँग प्रेममा रहेको पनि चर्चा चल्ने गर्छन् ।
अदितिले मोरानीसँगको तस्वीर सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेकी थिइन्। फाटफुट हिन्दी म्युजिक भिडियोमा समेत काम गरेकी अदितिले आफ्नो इन्स्टामा एक तस्वीर अपलोड गरेकी छिन्। तस्वीरमा उनलाई बैजनी रंगको बिकिनी अवतारमा देख्न सकिन्छ । यो तस्वीर अद्वित वैद्यले खिचेका हुन् । उक्त तस्वीर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले मन परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले हि’न्दीमा लेखेका छन्, ‘ह’ट छौ तिमी ।’
नेपाल र भारतमा समेत फ्यान कमाएकी अदिति बलिउड छिर्ने क’सरतमा छिन् । तर, उनी सफल भएकी छैनिन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘तपाईंको सु’न्दरताका लागि कुनै शब्द नै छैनन्, तपाईं साँच्चिकै अप्सरा हो ।’ त्यसो त अदिति सामाजिक सञ्जा लमा निकै सक्रिय रहने गर्छिन् । उनको सुन्दरताको फ्यानले खुबै तारिफ गर्ने गर्छन् । हेर्नुस् अदितिका अन्य केही तस्वीर:
विरोधीहरुले सरकारको राम्रो कामको पनि विरोध गरे : प्रधानमन्त्री ओली
जंगलमा त्रिपाल मुनिको बास, भन्छन- खाना नपाएर भोकै म’रिन्छ होला !
काठमाडौंमा अचनाक किन बढ्यो चहल पहल ?
अमेरिकामा नेपालीलाई पौने ३ करोड द’ण्ड तिराइयो
मनसुनको सुरुवातमै किन पर्‍यो धे’रै पानी ?
निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशियो !